Iindaba - IBritish Glass iyavakala kwisilumkiso sonikezo lwesixokelelwano kwi-DSS yaseScotland
IBritish Glass iye yalumkisa ukuba amashishini amaninzi abalulekileyo kwidayari yokuhambisa iziselo aya kuchaphazeleka kakubi yiSchool Deposit Return Scheme (DRS).
UDave Dalton, igosa eliyintloko, iGlasi yeBritane, kwiNgqungquthela yokuPakisha indalo esingqongileyo
Ngenxa yokuba ingeniswe ngo-2022, iGlass yaseBritane yathi inkxalabo ibandakanya ukuwohloka komgangatho we-kerbside yokusetyenziswa kweglasi kwakhona, ukunyuka kweepakethe zeplastiki kunye ne-CO.2 ukuphuma.
Umlawuli oyiNtloko uDave Dalton ubhalele urhulumente waseScotland echaza ezi zinto zixhalabisayo, kwaye wathi i-Glass yase-Bhritane iyakwenza konke okusemandleni ukukhokela ukuphunyezwa kwe-DRS ukuqinisekisa ukuba izinto ezibalulekileyo ziyaqwalaselwa kwaye icele isihlalo kumzi-mveliso kwiQela leNgcebiso ngoFezekiso njengoko. Ngumbandela ongxamisekileyo.
Ngokwahlukileyo, wathi umsebenzi we-decarbonisation uyaqhubeka ukujongana ne-Glass ye-UK Glass kunye ne-Furnace esandula ukubhengezwa yeZiko elizayo kwiJamani.
I-Glass futures iya kuba sisiseko sokuqala esifikeleleka ngokulula emhlabeni, esininzi sokunyibilikisa iglasi kunye nendawo ephambili yokuphanda kwemithombo yeoyile enokusetyenziswa kwezinye izinto - into ephambili ekuncedeni icandelo leglasi ukufikelela kwithagethi yayo ye-decarbonise ngo-2050 kwaye ibe ngumnatha- zero ekukhutshweni kwekhabhoni.
Isixhobo esandula ukubhengezwa seXesha elizayo siza kuba sisithando sombane esikhulu esikhulu samahashe e-oster-ukuze kusebenze amandla ayihlaziyekayo angama-80% emhlabeni. Iya kuthatha imithombo yamandla ombane wamandulo kunye nokusika ii-CO2 ezikhutshwa ngama-60%. Kwenye into yokuqala, abavelisi bezitya zeglasi abangamashumi amabini basebenza kunye ukuxhasa ngemali iprojekthi yokulinga kunye nokubonisa ingqikelelo. Iqela laseArdagh liya kwakha iziko lomlilo eJamani ngo-2022, ngovavanyo lweziphumo zokuqala ngenxa ka-2023.
I-DRS Imigaqo yadluliselwa izolo izolo (nge-13 kaMeyi) ngaphandle kweefowuni ezivela kumzi mveliso, abathengi, kunye ne-MSP ephikisayo ukuba ilibazise.
Amalungu e-SNP (36) avotele i-Conservatives avota (16) kunye nabasebenzi kunye neLiberal Democrats draining (19).
Ukuthetha malunga nesiphumo, uDave Dalton, umphathi omkhulu waseBrithani Glass uthe: "Besingesodwa xa sicela urhulumente waseScotland ukuba alibazise imigqaliselo ye-DRS de yaziwe impembelelo ye-COVID-19. Amashishini amaninzi, kubandakanya le yinxalenye yemizi-mveliso yethu kunye nonikezo lokuhambisa awekho kwimeko yokujongana nomthwalo owongeziweyo iskimu esiya kubabeka kuwo.
"Siyaqhubeka nokukholelwa ukuba enye imodeli eyongezelelweyo yoXanduva loMvelisi (i-EPR) iya kunyusa amaxabiso okurisayikilisha kwakhona, ibe yeendleko ngaphezulu kwaye inikezela kabini i-CO.2 ukonga kune-DRS eScotland.
"Nangona singakholelwa ukuba i-DRS sisisombululo esifanelekileyo sokurisayikilishwa kweglasi, siza kusebenza noRhulumente waseScotland kunye nomphathi wesikimu ukunciphisa umonakalo kushishino lweglasi yaseScotland kunye nokuqinisekisa amazinga aphezulu okuphinda asetyenziselwe ukuphinda ubonelele ngomgangatho obalulekileyo kunye. Ubuninzi bepleyiti efunekayo kubavelisi beglasi.